MARKAAKIIBTA CHINA OO SI QALDAN UGU TABABAR QAATAY MARAAKIIB MARAYKAN AH BIYAHA CHINE | Toggaherer's Weblog
INDHA BUUR OO AHAA XILDHIBAAN KA TIRSAN DAWLADA SOMALIA OO LAGA MUSTAAFUYEY DALKA
Oslo 10 March 2009 (THN)
Shan Markab oo China laga lee yahay ayaa si khatar ah loogu ag carbiyay Markab nooca Dagaalka ee Maraykanaka ah meel aan saas uga fogayn Bada Konfurta China, , sida ay sheegayso Xukumada Maraykanku.
Saraakiisha Maraykanaka ayaa aaminsan in ay tani ka dambaysay maalmo kadib markii ay soo kordheen Habdhaqanka Daan daansi oo ay wadaan Marakiibta Dagaal ee Dalka China.
Tan ayaa waxa ay jabinaysaa Sharciga Caalamiga ah, taas oo tixgalinayasa Isticmaalida ay adeegsanayaan Isticmaalayaasha Baduhu marinkan, ayuu tibaaxay Afhayeen u hadlay Xarunta Pentagon ee Maraykanka.
Qaraar ka dhan ah Chinaha ayaa laga filayay in uu ka soo baxo Maraykanka, taas oo looga hadlayo gardarada ay wadaan maraakiibta Dagaal ee China oo ku xad gudbay markab Taagnaa Biyaheeda oo ay Pentagonku ku tilmaamtay mid meel ka dhac ah.
Dhacadan ayaa dhacday maalintii Axdii ahayd ee la soo dhafay taas oo ay ku sharaxaday Haya’ada Ciidamada Badaha ee (USNS) oo si aan ceeblahayn iyo Eedba ku marayay jihadoodi Biyaha Caalmiga meel u jirta 75 mayl oo u dhiganta 120 kiiloomitir Konfurta Jasiirada Hainan, sida ay ku sheegatay Xukumada Maraykanka hadal ka soo baxay.
Halkaasna waxaa ka dhashay in mid ka mid ah Markiibta Dagaalka ee Maraykanku in uu ku Afuufay Biyo aad oo xoogbadan mid ka mid ah Markiibta China laga lee yahay si uu halkaas uga dhaqaaqo, ayay raacisay Xukumada Marakayknku.
Waxaa kaloo jirta in labo ka mid ah markiibta China ay ku soo tuuren qeyba kamid ah Alwaax ay tuurayeen si markaas ay si qasab ah ugu joojiyaan Maraakiibta Maraykanka, ayay ku daratay Xukumadu.
Si sharci daro ah iyo aqoon darada carbinta ciidan ee ay samaynayaan Maraakiibta Dagaalka ee China ayaa jabinaysa Qaraarka Caalmiga ah ee Adeegsiga Badaha iyada oo la eegayo Xuquuqda iyo Amaanka sharciga ah Isticmaala Badaha.
Maraykanka ayaa hadalkiisa ku soo gaba agabeeyay in ay rajaynayaan in ay Marakiibta China wax ka ogaan doonaan masuuliyada marakiibta Isticmaala Badahooda iyo meelaha u dhaw dhow iyo joojinta Daandaansiga ciidan ay hor seedi karto daganaasho laan waarta oo dhex marta Maraykanka iyo China.
Arintan ayaa dhalin karta in ay khilaaf ka dhix abuurto China iyo Maraykan taas oo uu Maraykanku u qadan karo arinta mid uu Chine ku tijaabinaayo awoodiisa mariinska cudeed ee bada uu ku leeyahay .
Abdiwahab M. Ibrahim